नङ पालिस लगाउदा निम्तिन सक्छन् यस्ता समस्याहरु - जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
नङ पालिस लगाउदा निम्तिन सक्छन् यस्ता समस्याहरु – जान्नुहोस्
व्यक्तित्व विकाश, स्वास्थ्य
नङ पालिस लगाउँनु अहिलेको मात्र होइन, निकै समय पहिले देखिको फेसन हो । महिलाहरुलाई सौन्दर्यका लागि अनेक प्रशाधनहरु चाहिन्छन् । नङ पालिस पनि त्यस्तै मध्येको एक सौन्देय प्रशाधन हो ।
नङमा रंग लगाउँने मात्र नभएर अहिले नङमा विभिन्न आकृतिहरु बनाउँने चलन पनि बढ्दो छ । बढ्दो आधुनिकता र उत्पादनसँगै नङ मात्रैको सौन्दर्यका लागि बजारमा अनगिन्ती ब्रान्डहरु पाइन्छन् तर सबैमा केहि समानता भने अवश्य हुन्छ ।
यहाँ हामी तपाईहरुलाई नङमा प्रयोग हुने पालिसका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । तपाईले यो लेख पढेर वास्तवमा नङमा लगाइने पालिसका बारेमा धेरै कुराहरु थाहा पाउँन सक्नु हुनेछ ।
तपाईलाई विश्वास नलाग्ला तर नङ पालिसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ ।
नङ पालिसमा प्रयाेग हुने केमिकल ट्रिफेनाइल फाेस्फेटले शरीरलाई निकै धेरै असर पुर्याउँछ । यसलाई टिपिएचडी पनि भनिन्छ । यसले हाम्राे इन्डाेक्राइनमा गढबढी गरिदिने भएकाले हाम्राे हर्माेनहरुमा यसले समस्या पुर्याउँछ । जसले अन्तत ताैल मात्र बढ्दैन, अन्य समस्याहरु पनि उत्पन्न हुन्छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी महिलामा गरिएकाे एक अध्ययन अनुसार नङ पालिस लगाएकाे १० घन्टादेखि १४ घन्टामा उनीहरुकाे शरीरमा नङ पालिसमा प्रयाेग भएकाे केमिकल पाइएकाे थियाे ।
याे अध्ययन गरेकी जाेहना कांगलटनले पछिल्लाे समय यसकाे प्रयाेग बढ्दै जाँदा झन् समस्या भएकाे बताएकी छिन् । उनीहरुले अनुसन्धानमा प्रयाेग गरेका १० मध्ये ८ नङ पालिसमा टिपिएचपी पाइएकाे बताएका छन् ।
यहाँ केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
सौन्दर्य सामग्रीसम्बन्धी थप केहि जानकारी :
हाम्रो आँखा संवेदनशिल हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय महिलाले आँखामा ‘आइलाइनर’ प्रयोग गर्छन । तर, आँखाको भित्री ढकनीमा सिसाकलमको प्रयोग गर्दा हाम्रो आँखाको दृष्टि गुम्ने सम्म खतरा हुने विज्ञहरु बताउँछन् । आइलाइनरमा प्रयोग हुने रंगमा तेल, सिलिकन, गम, मैन लगायतका बस्तुहरुको प्रयोग हुने भएकाले यसले आँखालाई रातो बनाउने, व्याक्टेरियाले संक्रमण गर्ने र धमिलो दृश्य देखिने हुन्छ । आई एन्ड कन्ट्राक्ट लेन्स नामक जर्नलमा प्रकाशित एउटा अध्ययन अनुसार आईलाइनरमा प्रयोग हुने रसायनयुक्त चिज आँखाका लागि हानीकारक हुने पुष्टि भएको छ ।
कतिपय महिला लिपिस्टकबिना आफू पूर्ण नभएको महसुस गर्छन् । तर, अधिकांश अध्ययनले लिपिस्टिकमा लिडलगायत अन्य उत्तेजक र हानिकारक धातु रहको पुष्टि गरेका छन् । लिपिस्टिकमा क्याडमियम, आल्मुनियमलगायतको धातु हुने र यसले स्नायु प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रुपमा हानि गर्ने मात्र होइन, गर्भवतीको भ्रुणमा समेत असर गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
लिपिस्टकमा लिडलगायतका हानिकारक रसायन प्रत्यक्ष रुपमा मिसाइएको हुँदैन तर अधिकांश लिपिस्टक त्यस्ता खनिजबाट बनाइएको हुन्छ, जसको स्रोत विषादी हो । युनिर्भसिटी अफ क्यालिफोर्नियाले गरेको एक अध्ययनमा धेरै पटक लिपिस्टक प्रयोग गर्ने महिलामा छालाको क्यान्सरलगायतको गम्भीर रोग हुने गर्छ ।
आल्मुनियमजस्तो विषादीयुक्त धातुबिना लिपिस्टक बनाउन नसकिने भन्दै यसले स्वास्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अध्ययनमा जनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा लिपिस्टकमा भएका रसायन मुखभित्र पुगी शरीरमा क्यान्सरसम्म हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अनुहारमा लगाउने क्रिम
अनुहारमा दल्ने विभिन्न क्रिममा पनि रसायनको मिसावट हुने भएकाले सकभर यस्ता उत्पादन प्रयोग नगर्न विज्ञहरु सल्लाह दिन्छन् । फेस क्रिममा प्रयोग हुने मिथेनका कणले अनुहारमा एलर्जी बढाउनुका साथै राता दाग देखाउँछ ।
यस्ता क्रिमको प्रभाव महिनौंपछि पनि देखिन सकिने बताइन्छ । क्रिमका रसायनले आखा र अनुहारको नरम छाला उक्किने, घाउ आउने र बिस्तारै दीर्घकालीन रुपमा छालाको रोग लाग्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, नङ पालिसमा राखिने रसायनका कारण छालामा एलर्जी हुनुका साथै क्यान्सरसम्म लाग्न सक्छ । नङ पालिसको प्रभाव आँखाको ढकनी, मुख वरपर र घाँटीमा सोझै देखिने लन्डनस्थित सौन्दर्यविज्ञ निकोलस लोईको कथन छ । नङ पालिस लगाउँदा मात्र होइन, घोट्दा पनि हातलगायत छालाका संवेदनशील स्थानामा लतपतिने भएकाले एलर्जीलगायतका समस्या ल्याउने गर्छ ।
Don't Miss it हाम्राे घरमा रहेको अदुवा जीवनबुटी हो, यसको सेवनले क्यान्सर, अम्लीय, सुगर चैट
Up Next भोजनको नियम बारे जानिराखाैँ, कुन सिजनमा के खाने ?
यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ अल्सर, कसरी जोगिने ? के खाने ? के नखाने ?
अल्सर हुनुको अर्थ आन्द्राको मुखमा घाउ हुनु हो । ग्यास्ट्रिक बढ्दै जाँदा अल्सर हुन पुग्छ । अहिलेको मानिसहरुमा ग्यास्ट्रिक बढ्दो…
लगातारको खोकी लागि रहनु राम्राे सङ्केत हाेइन, क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ एक चाेटि पढाैँ
चिसोमा खोकी लाग्छ, रुघा लाग्छ । हामी ठान्छौं, चिसोको कारण यस्तो भयो । स्वभाविक हो, चिसोले खोकीको मसस्या निम्त्याउँछ ।…
आँखाले दिन्छन् यस्ता गम्भीर रोगको संकेत, के कारणले आउँछ आँखामा समस्या ? जान्नुहोस्
आँखामा देखिने सातातिना कमजोरीले ठूला रोगको संकेत दिइरहेका हुन्छन् । तर, हामीले कतिपय आँखाका कमजोरीहरुलाई बेवास्ता गर्छौं। यी समस्याअरु पछि…
गरीबी र दुर्भाग्य हटाउन यी कुरा घरमा नराख्नुहोस् – घर कुन दिशामा फर्केको राम्रो ?
वास्तुशास्त्रमा यस्ता धेरै चीजहरूका बारेमा बताइएको छ जसलाई घरमा राख्दा गरीबी र दुर्भाग्य निम्तिन्छ । तपाईंको पनि घर वा पसलमा…
अनुहार चाउरी पर्न थाल्यो ? यी फलफूलले चाउरीपन हटाई अनुहार आकर्षक बनाउन गर्दछ
उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर कतिपय उमेर पुगीसकेकाहरुको पनि अनुहार कलिलै र चाउरी…
घरमा यस्ता टुटेफुटेका सामान राख्नाले नकारात्मक उर्जा बढाउँछ, थाहा पाइराख्नुहोस्
बास्तु दोष भयो भने घरपरिवारमा आर्थिक संकटसम्बन्धी समस्याहरु आउने गर्छ । त्यतिमात्र होइन पारिवारीक माहोल पनि खटपट हुने, सधैँ असफल…